Ferienhof Gerda, (St. Georgen), ifulethi leholide Schwalbennest, 25sqm, 2-3 abantu - I-Airbnb
Ferienhof Gerda, (St. Georgen), ifulethi leholide Schwalbennest, 25sqm, 2-3 abantu
Sankt Georgen, Baden-Württemberg, i-Germany
U-Christiane - Lohospo Service Team unokuphawula okungu-1455 kwezinye izindawo.
Ifulethi iSchwalbennest, 25sqm, 2-3 abantu
Ifulethi elisanda kufakwa igumbi elilodwa elithi "Schwalbennest" labantu ababili noma imindeni emincane (abantu abangu-2-3) linikeza konke okudingayo ukuze uhlale ukhululekile endlini yethu cishe ngamamitha-skwele angama-25.
Igumbi lokuphumula elihlanganisiwe nekamelo lokulala lihlaba umxhwele ngekhishi elifakiwe elihlanganisa i-microwave, i-TV, i-WiFi, imibhede emibili nombhede osofa, kanye nombhede nempahla yezingane uma iceliwe. Iphasishi elihlukile eline-cloakroom yalo liholela egumbini lokugezela elihlukile elineshawa / indlu yangasese.
Intengo ihlanganisa ilineni yombhede, ilineni letafula, amathawula, amathawula etiye, ugesi, amanzi, ukushisisa nokuhlanza okokugcina.
Ngekhefu elifushane lezinsuku ezifika kwezingu-3 kukhona i-€ 20.00 eyengeziwe futhi sikucela ukuthi ulethe ilineni lakho lombhede noma sizokhokhisa i-€ 5.00 eyengeziwe ngombhede ngamunye.
Nethezeka, isipiliyoni, thola imvelo, izwe kanye nabantu balo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka: leli iholide lomndeni wonke epulazini lethu eHlathini Elimnyama elihle. I-zoo yethu efuywayo enamakati, onogwaja, izingulube, izingulube ezincane, izinkukhu, izimvu nezinja ezimbili zikumema ku-adventure nsuku zonke. Wena kanye nezingane zakho nizojabulela namaponi amabili athandekayo aseShetland namahhashi amathathu. Ipulazi lethu elisanda kulungiswa lisendaweni ethule kakhulu, liqhelelene nanoma yimuphi umsindo nethrafikhi futhi lizungezwe amahlathi nezimfunda. Ngaphezu kokugibela okunethezekile okuqondiswayo namahhashi ethu endaweni, izivakashi zethu zingalindela amasimu ambozwe ngefenisha yasengadini, utshani obushiswa yilanga obunefenisha yesimanje, izoso nendawo yomlilo, ithenisi letafula, i-trampoline, inkundla yokudlala enezimoto zezingane, isilayidi esikhulu sezingane, amaswing, i-sandpit. futhi Playhouse zezingane, izilwane unhlangothi futhi njengoba i extra, ukugibela leli ugandaganda. Ungakwazi futhi ukujabulela amaqanda amasha avela ezinkukhu ezijabule zamahhala, amasoseji avela ebhusha lesifunda, izinhlobo ezihlukahlukene zejamu okuzenzela, i-pasta eyenziwe ngamaqanda ethu, u-ayisikhilimu wepulazi ezinhlobonhlobo ... nezimanga eziningi. Indawo ekahle yokuqala yokuhamba ngezinyawo eziningi nezindawo ezinhle zokuvakasha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sankt Georgen namaphethelo